'बुलबुल' निर्देशक विनोद पौडेललाई मनपरेको... :: प्रभाकर गौतम :: Setopati
निर्देशक विनोद पौडेल (बाँया) र फिल्म 'डोर' को पोस्टर (दाँया)
गहन विषयलाई आमदर्शकले बुझ्ने गरी सिनेमा बनाउनु गाह्रो काम हो। भारतीय निर्देशक नागेश कुकनूरले फिल्म 'डोर' मा यो काम निकै सुन्दर ढंगले गरेका छन्। यही विशेषताले गर्दा नेपाली फिल्म 'बुलबुल' का निर्देशक विनोद पौडेल डोरबाट निकै प्रभावित भए।
सन् २००६ मा सार्वजनिक डोर विनोदले २००९ देखि २०११ मा अध्ययनका लागि लन्डन बसेका बेला हेरेका थिए।
विनोद सम्झन्छन्, 'डोर मैले श्रीमतीसँगै डिभिडीमा हेरेको थिएँ। त्यस बेला हेरेको यो सिनेमाको प्रभाव आजसम्म ताजा छ।'
निर्देशक विनोदलाई मन परेको डोरको संक्षिप्त कथा यस्तो छः
हिमाञ्चल प्रदेशकी जीनतका श्रीमान अमर बिहेलगत्तै साउदी अरब जान्छन्। साउदीमा अमरमाथि आफ्नो कोठामा बस्ने साथी शंकरलाई मारेको आरोपमा फाँसीको सजाय सुनाइन्छ। दुई महिनापछि फाँसीमा चढाउने तय भइसकेको अमरलाई बचाउने जीनतसँग आशाको त्यान्द्रोमात्रै बाँकी हुन्छ। त्यो हो, माफीनामामा मृतककी पत्नी मीराको हस्ताक्षर।
हत्याराकी श्रीमतीले मृतकको पत्नीसँग आफ्नो श्रीमानलाई जीवनदान दिन आग्रह गर्नुपर्ने परिस्थितिले दर्शकको मन चसक्क पार्छ। हरे! यो कस्तो जटिल अवस्था, कत्रो विडम्बना!
डोर यस्तै विडम्बनाको कथा हो।
निर्देशक विनोदलाई नयाँ कथ्यशैली र कलात्मक प्रयोग भएका सिनेमा मन पर्छ। डोर निर्देशन र प्रस्तुतिका हिसाबले रोचक र अब्बल हुँदाहुँदै पनि उनको विचारमा नयाँ आयाम र कथ्य थप्ने सिनेमा भने होइन।
'तर यो बलिउडको सिनेमा बनाउने परम्परागत सूत्रमा पूरै कैद नभई त्यो घेरा तोडेर त्यसलाई नयाँ उचाइमा पुराउने सिनेमा भने पक्कै हो,' विनोद भन्छन्।
फिल्ममा आयशा टाकिया मृतककी पत्नी मीरा र गुल पनाग जीनतको भूमिकामा छन्। यी दुई पात्रबीच दुरी हुँदाहुँदै पनि अमूर्त सम्बन्ध छ। दुईमध्ये जीनत बलियो र स्थिर पात्र हुन्। मीरा परिवर्तनशील पात्र।
डोरका दुवै मुख्य पात्र फरक सांस्कृतिक परिवेश र मूल्य मान्यतामा हुर्केका महिला हुन्। मुस्लिम समुदायकी जीनत आफ्नो जीवनको निर्णय आफैं लिने स्वतन्त्र पात्र हुन्। राजस्थानकी मीरा सम्झौता गर्न अभ्यस्त गुम्सिएकी पात्र। यी दुई परस्पर विपरीत स्वभावका पात्रलाई एकै ठाउँ उभ्याएर निर्देशकले चलाखीपूर्वक महिलाको दुःख र संघर्षका पाटा उधिनेको कुरा पनि फिल्मको मन पर्ने पक्ष मान्छन्, विनोद।
'उस्तै खालको समाजमा एउटा बोल्ड र अर्को गुम्सिएको पात्र फिल्मको मीठो एलिमेन्ट हो। डोरमा महिला समस्याबारे नारा छैन, तर उनीहरूको मर्म महशुस गराउँछ,' उनी भन्छन्, 'दुवै पात्रको उकुसमुकुसले दर्शकलाई ठाउँ ठाउँमा झस्काउँछ। उनीहरूबीच हुने संवादले संवेदनशील बनाउँछ।'
आयशा टाकिया र गुल पनाग बाहेक सिनेमामा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने श्रीयस तलपाडेको कुशल अभिनयले बाँधिराख्छ। यसबाहेक 'ये हौसला कैसे रुके' होस् वा 'केशरीया बालम', डोरको संगीतले दर्शकलाई विषयको मर्म र पात्रको भावनासँग जोडिराख्छ।
हरेक सिनेमा मन पर्नुमा दर्शकका निजी कारण हुन्छन्। डोर सँग विनोदका पनि केही सम्बन्ध गाँसिएका छन्। अझ, उनको निर्देशनको चर्चित सिनेमा 'बुलबुल' र डोरमा केही समानता पनि भेटिन्छन्।
उनका अनुसार, पूर्वीय समाजका धेरै राम्रा विशेषता आर्थिक कारणले धराशयी बनेका छन्। भारत, नेपाल वा दक्षिण एसियाली मानिसहरू आर्थिक संकटकै कारण पारिवारिक सुख र निजी सपनालाई दाउ लगाएर विदेशी भूमिमा श्रम गर्न जान बाध्य छन्। यसरी विदेश पुगेका धेरै श्रमिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउँदै आएका छन्। डोरमा जस्तै 'बुलबुल'मा पनि विदेशी भूमिमा श्रम गर्न जाने परिवारका मानिसले चुकाउने मूल्यको कथा देखाइएको छ।
'आर्थिक राजनीतिक कारणले हाम्रा सम्बन्धहरू भत्किएका छन्। डोरमा यो कुरा राम्ररी देखिएको छ, जसले नेपाली दर्शकलाई समेत सजिलै जोड्छ जस्तो लाग्छ,' उनी भन्छन्।
विनोदले त झनै साउदी अरब जाँदा त्यहाँका विदेशी मजदुरमाथि निर्मम सजाय दिइएका घटना प्रत्यक्ष देखेका रहेछन्। काल्पनिक दुर्घटनाका घटना बनाई मारिने कथाहरू सुनेका रहेछन्। डोरमा पनि साउदी गएर मारिने र फाँसीको सजाय सुनाइने पुरुष पात्रहरू कथाको केन्द्रमा छन्। यो कुराले पनि डोरको कथाले छोएको उनी बताउँछन्।
समाजको यथार्थसँग नजिक कथालाई तडकभडक बिना रोचक र गहन रुपमा प्रस्तुत गरिएको डोरको सबभन्दा बलियो पाटोबारे उनी भन्छन्, 'डोर जति सरल छ, त्यति नै गहन छ। जति संवेदनशील छ, त्यति नै रोचक छ। फिल्मको अन्तर्यमा लुकेको ह्युमन इलिमेन्ट महत्वपूर्ण छ।'
विनोद हरेक निर्देशक आफूले भन्ने कथाप्रति इमानदार भए मात्रै राम्रो सिनेमा जन्मने बताउँछन्। डोरमा उनले निर्देशक नागेशको इमानदारिता महशुस गरेका छन् रे!
परम्परागत सूत्रभन्दा फरक काम गर्ने संसारभरका निर्देशकले लगानीकर्ता, बितरक र बजार पाउन संघर्ष गर्नुपर्छ। 'बुलबुल' निर्देशनदेखि प्रदर्शन गर्ने चरणसम्म विनोद आफैं यसको भुक्तभोगी बने।
नागेश कुकूनुर र डोरबाट नेपाली निर्देशकहरूले थोरै लगानीमा पनि इमानदार भएर कसरी आफ्नै समाजको सिनेमा बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रेरणा लिन सकिने विनोद बताउँछन्।
डोर मन परेमा नागेशका 'धनक' र 'इकबाल' पनि हेर्ने सुझाव उनी दिन्छन्।
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ १७, २०७७, १२:०८:००